Gabadh 7-Sannno jir ah oo Aabeheed Booliska ugu Dacweysay Musqul Darteed. | Raadreeb
December 13, 2018 | Filed under: Uncategorized,Wararka | Posted by: Mr Sayid
Hanifa Zaara ayaa warqad ay booliska u qortay ku sheegtay in aabeheed uu “khiyaanay” sidaas awgeedna uu mudanyahay in la xiro. Waxay sheegtay iney ceeb u aragtay iney mar walba xaajadeeda ku soo gudato bannaanka, maadaama uusan gurigooda suuli lahayn.
Hay’adda Unicef ayaa sheegtay in dad fara badan oo reer Hindiya ah aysan heysanin musqulo, ku dhawaad 500 oo milyan oo ruuxna ay bannaanka ku xaajoodaan.
Xitaa meelo ay ka dhisanyihiin Muqsulaha, waxaa jira dad badan oo aan isticmaalin.
Hanifa oo waalidkeed kula nool magaalada Ambur ee ka tirsan gobolka Tamil Nadu ee Koonfurta dalkaas, waligeed musqul kuma aysan yeelan guriga.
Waxay u sheegtay wariyaha BBC-da ee gobolka Tamil oo lagu magacaabo Krithiika Kannan in dhowr qof oo dariskeeda ah ay leeyihiin musqulo.
Waxay ka codsatay aabeheed inuu sidoo kale gurigooda dhexdiisa uga dhiso suuli.
“Ceeb ayaan dareemaa marka aan bannaanka xaajo u aado, waana ka xumaadaa marka ay dadka isoo eegaan”, ayey tiri Hanifa.
Warqadda ay u qortay booliska ayey ku sheegtay in aabeheed uu ka ballan qaaday inuu suuli u dhisi doono haddii ay kaalinta koowaad ka gasho imtixaanka fasalkeeda.
“Waxaan kaalinta hore galayay ilaa marki aan dhiganayay fasalka ugu horreeya ee aasaasiga ah, hadda waxaan ku jiraa fasalka 2-aad ee dugsiga hoose, walina wuxuu leeyahay suuli waan kuu dhisayaa oo afka kaliya ah. Waxan waa nooc ka mid ah khiyaanada, marka fadlan hala xiro”.
Gabadhan yar ayaa dalbatay in booliska ay aabeheed ku khasbaan inuu u qoro warqad rasmi ah oo uu ku sheegayo wakhtiga uu suuliga u dhisayo.
Aabeheed oo lagu magacaabo Ehsanullah ayaa BBC Tamil u sheegay in uu horayba u sii billaabay dhismaha Suuliga, balse wali uusan dhammeystirin, maadaama uusan u heynin lacag ku filan.
“Waxaan ka codsaday Hanifa iney isiiso wakhti dheeri ah, laakiin hadalka wey iga goosatay, sababtoo ah waan ka soo bixi waayay ballanteydii”.
Hase ahaatee Hanifa lama dhacsana arrintaas. “ilaa goorma ayaan weydiin karaa inuu ii sameeyo isla halkaas wax?, mar walba wuxuu ii sheegaa marmarsiiyadaas ku saabsan inuusan lacag ku filan heysan, marka waxaan aaday booliska”.
Maalintii Isniinta ahayd ayey tagtay saldhigga booliska ee u dhow iskuulkeeda, iyadoo ay la socotay hooyadeed oo lagu magacaabo Mehareen.
“Waxay la timid boorso ay ka buuxaan koobab abaal marin ah iyo shahaadooyin, waxayna ku taxday miiskeyga”, ayey BBC-da ku tiri haweeney ka tirsan booliska oo la yiraahdo A Valarmathi.
Ms Valamarthi ayaa sheegtay in ay saldhigga ugu yeertay Mr Ehsanullah, uuna si deg deg ah ku yimid isagoo ka walaacsanaa in xaaskiisa iyo gabadhiisa ay halis ku jiraan.
Wuxuu sheegay inuu aad ula fajacay sababta ay biiliska ugu yeereen.
Ka dib markii uu akhriyay warqaddii ay soo qortay Hanifa, wuxuu sheegay iney isaga ka baratay sida loo diyaariyo warqadaha rasmiga ah.
Mr Ehsanullah ayaa badanaa dadka xaafaddab ka caawiya iney qortaan warqadaha loo diro xafiisyada dowladda iyo sharci dajiyeyaasha.
“Waligey kuma fikirin iney tan aniga dib iigu soo laabaneyso” ayuu yiri.
Hanifa dadaalkeeda waxay ku kasbatay taageerada booliska.
“Cabashadeeda waxay ahayd mid aad daacad u ah, sidaas awgeed waxaan isku daynay inaan xal u helno arrinta” ayey tiri Valamarthi.
Waxay askariyadda qeylo dhaan u dirtay saraakiisha dowladda hoose, kuwaasoo hadda qorsheynaya iney dhaqaale u aruuriyaan dhismaha 500 oo musqulood oo laga dhisayo xaafadda ay daganyihiin reerka Hanifa.
Hanifa waxay sheegtay iney “aad ugu faraxsantahay” natiijada ka soo baxday warqadda ay qortay.
Aabeheed ma aysan la hadleynin 10-kii maalmood ee lasoo dhaafay.
Laakiin boolsika ayaa waan waan ka dhex sameeyay, ugu dambeyntiina Hanifa iyo aabeheed way is gacan qaadeen.